व्यवसाय बलियो नभई देश समृद्ध हुन सक्दैन: नाडा अध्यक्ष दुलाल - सुनाखरी न्युज
व्यवसाय बलियो नभई देश समृद्ध हुन सक्दैन: नाडा अध्यक्ष दुलाल
Posted on: December 21, 2019 - 7:11 pm
नेपाल अटोमोवाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद दुलाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। झण्डै १ दशकदेखि नाडामा आवद्ध दुलालले ४३औं साधारणसभा मार्फत अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरे । अटोमोवाइल्स क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायहरुको सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सवारीसाधनको आयात घट्दो छ, यसको कारण के होला ?
मुख्य समस्या भनेको डाउन पेमेन्टको नीति र लगानीको अभाव हो। त्यस्तै सरकारले सिसी अनुसार ट्याक्स लगाएको छ। तपाई मन परेको सवारीसाधन किन्न सक्नुभएन भने अर्को थोरै सिसीको सवारीसाधनबाट सन्तुष्टी नहुन सक्छ। बरु पुरानै चढिरहनु हुन्छ। यस्ता विभिन्न कारणले सवाारी साधनको आयात घटेको हो।
अटोमोवाइल क्षेत्रमा तपाइले देख्नु भएका प्रमुख समस्याहरु के–के हुन्?
तत्कालको समस्या भनेको व्यवसाय घट्दो क्रममा छ। व्यवसायीको मनोबल घटिरहेको छ। समयमा ऋण नपाएर, ऋणको प्रकृया अप्ठेरो बनाएर पनि व्यवसायीलाई समस्यामा पारिएको छ। नीतिगत कुरामा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेर व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै सडकको लागि भनेर उठाइएको पैसा सडकमा प्रयोग भएको छैन। सडक भएन भने न अटोमोवाइल क्षेत्रको विकास हुन सक्छ, न पर्यटनको न कृषिको विकास हुन सक्छ। सबैलाई जोड्ने भनेको सडक हो, सडक भइसकेपछि अटोमोवाइल क्षेत्र मात्र होइन समग्र देश सम्वृद्धि तर्फ लाग्छ।
तपाइले प्रतिबद्धता जनाएका कामहरु के के हुन् ?
गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने त भइहाल्यो। त्यो बाहेक सडक सुरक्षामा केही गर्ने ठूलो इच्छा छ। त्यस्तै मेरो कार्यकालमा एउटा भए पनि अटोमोवाइल इन्डष्ट्री खुल्यो भने ठूलो उपलव्धी हुनेछ।
व्यवसायीलाई ‘फेयर ट्रेड’मा ल्याउने सरकारको चाहना हो र हाम्रो पनि उद्देश्य हो। व्यापार भनेको फेयर हुनुपर्छ। फेयर ट्रेडलाई शत प्रतिशत पुर्‍याउनको लागि व्यवसायी फेयर हुनुपर्‍यो। प्रशासन फेयर हुनुपर्यो। यो कुरा बुझाउन ७ ओटै प्रदेशमा गएर साना व्यवसायीलाई पनि समेट्दै तालिम दिने मेरो लक्ष्य छ।
त्यहाँका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई कसरी फेयर ट्रेड गर्ने ? भ्याट, आयकरका सम्वन्धमा तालिम दिने मेरो पहिलो काम हुन्छ। कर कार्यालयबाट मान्छे आउँदा वा कर तिर्न डराउनुपर्ने वातावरण हटाउने प्रयास गर्छु र सबै प्रदेशमा कार्यसमिति मिटिङ गराउने सोंचमा छु। यसले गर्दा नाडा जिल्ला जिल्लामा पुगेको अनुभुत हुनेछ। नाडा अटो शोलाई अझै भब्य र सभ्य बनाउने प्रयास गर्छु।
नाडाले दिएको कतिपय सुझाव तुरुन्तै हल भएका पनि छन्। व्यवसायीले मागेको व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण मात्र हो। हामीलाई करको, भन्सारको समस्या होइन। यो त जनताले तिर्ने कुरा हो।
कर घट्यो भने जनताले सस्तोमा सवारी साधन पाउँछन्। हामीलाई सरकारले गर्नुपर्ने भनेको सहजीकरण गर्ने र मनोबल बढाउने मात्र हो। एउटा गाउँपालिका वडा अध्यक्षको ठूलो सम्मान छ, तर गाउँपालिकाको वडाभरको मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्नेको सम्मान छैन। यस्ता विभेद हटाउने मेरो प्रयास हुनेछ।
अटोमोवाइल व्यवसायप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भयो?
सरकारले अटोमोवाइल व्यवसाय र व्यवसायीलाई सकारात्मक लिएको देखिँदैन। तिनै व्यवसायीहरुसँग उद्योगको आशा गर्ने, ट्याक्स उठाएर देश समृद्धिमा लान खोज्ने, तर व्यवसायीलाई सम्मान गर्न नसक्ने, व्यवसायीहरुसँग बोल्दा पनि गोप्य बोल्न खोज्ने लगायत कारणले कयौ वर्षदेखि सरकार र व्यवसायी बीचको सम्वन्धमा खाल्डो छ। म त्यो खाल्डो पुर्ने प्रयास गर्ने गर्नेछु।
नाडामा अघिल्लो पटक एउटै प्यानलको साथीले तपाईको विपक्षमा उम्मेदवारी पनि घोषणा गर्नु भएको थियो नि?
विधानतः एक कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य बसेर अर्को कार्यकालमा पनि सदस्य भएपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हुन्छ। एकैपटक ठूलो पदाधिकारी भएका कारण त्योभन्दा माथि जान अध्यक्षमै जानु पर्ने बाध्यता र नजाँदा नाडा छोड्नुपर्ने बाध्यता भएकाले उहाँले अध्यक्षमा उठ्ने घोषण गर्नुभएको हो। हामीले उहाँलाई फेरि पनि नाडालाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएर मिलायौँ र उहाँले उम्मेदवारी दिनु भएन।
नाडाको झण्डै १ दशकको यात्रा कस्तो रह्यो ?
नाडाको प्रमुख उद्देश्य हामी व्यवसायीहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने हो, अटोमोवाइल क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने भन्ने हो। नाडामा म छिरिसकेपछि के थाहा पाएँ भने नेपालभर रहेका व्यवसायीको पक्षमा नीति बनाउनेदेखि लिएर समस्याको सिधा सम्वोधन हुनुपर्छ।
भन्सारमा पर्ने समस्या, आयकरको समस्या, भ्याटका समस्या लगायत अटोमोवाइल सम्वन्धी अकस्मात पर्ने समस्याहरुको तुरुन्त समाधन गर्ने र नीतिगत समस्या सुल्झाउनका लागि काम गर्ने नाडाको उद्देश्य हो।
त्यो जिम्वेवारीलाई सहज रुपले पदाधिकारीहरुले निर्वाह गर्नुभएको छ। यसमा मेरो पनि साथ रह्यो। अहिलेसम्मको अनुभवले, मैले पनि नेपालको समृद्धिमा, अटोमोवाइल क्षेत्रको विकासमा केही न केही टेवा पुर्‍याएँ।
अब यो क्षेत्रको नेतृत्व गरेर संस्थाको उचाई अझै बढाएर सरकारको दृष्टिकोण परिर्वतन गर्न बाँकी छ। दृष्टिकोण परिर्वतन गरेर अटोमोवाइल व्यवसाय बलियो नभई देश समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारलाई बुझाउने मेरो प्रमुख लक्ष हो।